उत्तर कोरियाले आज बिहान जापान सागरमा मिसाईल खसालेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जवाफ दिएको अनुमान - Like For Nepal
उत्तर कोरियाले आज बिहान जापान सागरमा मिसाईल खसालेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जवाफ दिएको अनुमान
टोकियो/जापान । आज( जनवरी ११ तारिख) बिहान उत्तर कोरियाले जापान सागरमा खस्नेगरी प्रक्षेपण गरेको ब्यालेस्टिक मिसाईल गत ५ जनवरीमा प्रक्षेपण गरिएको मिसाईलको संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट गरिएको भर्त्सनाको जवाफी शक्ती प्रदर्शन भएको हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ ।
उत्तर कोरियाले नयाँ वर्षको पहिलो सातानै गत ५ जनवरीमा एक व्यालेस्टिक मिसाईल प्रक्षेपण गरेको थियो । जापान सागरमा खसालीएको उक्त मिसाईल पश्चात अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया तथा संयुक्त राष्ट्रसंघले उत्तर कोरियाको उक्त आणविक गतिविधिको भर्त्सना गरेका थिए ।
आज खसालिएको मिसाईल कत्तिको घातक हो ? कुन उदेश्यले खसालीएको हो? लगायतका जवाफहरु अझै सार्वजनिक भईनसकेपनि समचार एजेन्सीहरुले जनाए अनुसार ७ हजार किलोमिटरसम्म मार हान्न सकिने क्षमताको भएको जनाएका छन् । यसबारे उत्तर कोरियाले आफ्नो कुनै प्रतिकृया राखेको छैन ।
उत्तर कोरियाले विगत लामो समयदेखि आफ्नो आणविक क्षमता प्रदर्शन स्वरुप जापानलाई मिसाईल प्रहार गर्ने धम्की दिँदै आएको छ । साथै हरेक वर्ष कम्तिमा पनि २/३ पटक आफ्ना नयाँ / नयाँ व्यालेस्टिक मिसाईलहरुको परिक्षण प्रक्षेपण गर्दै जापान सागरमा खसाल्ने गरेको छ ।
Prev७७ बर्षकिआमामाथी ब’ला’त्का’र,आमाछोरी रुँ’दै,पैसा दिएर लु’काउन खोजियो(भिडियो हेर्नुस)
Nextमलेसियामा केटिकै कारण हराउँदैछन् नेपाली युवाहरु !